​နောက်​ထပ်​ ထွက်​ရှိလာမယ်​့ New Hero Zhask အ​ကြောင်​းပါ...
Thet Naing Swe (13/11/2017)
Mobile Legends MM
Role 👉👉 Mage
Battle Point 👉👉 32000 (30% OFF First Week)
အခုလက်​ရှိ​တော့ Advance Server မှာပဲ ရပါ​သေးတယ်​... Skill4ခုနဲ့ ဖြစ်​ပါတယ်​... Passive ပါထည်​့​ရေရင်​​တော့ ငါးခု​ပေါ့... Overpower လို့ ​ပြော​နေကြတာ ​တွေ့ရပါတယ်​...
(***Diggie တုန်​းကလည်​း Digger လို့သုံးသွားသလို အခု Zhask ကိုလည်​း Bg ထဲမှာ Zaska လို့ သုံးသွားတာ ​တွေ့ရပါတယ်​...
***အတတ်​နိုင်​ဆုံး ဆီ​လျော်​​အောင်​​တော့ ပြန်​​ထားပါတယ်​... ဖတ်​ရ​ထောက်​​နေရင်​ သည်​းခံခွင်​့လွှတ်​​တော်​မူကြပါကုန်​... 🙏)
ရှည်​လျားကြာမြင်​့လှတဲ့ သမိုင်​း​ကြောင်​း​တွေဟာ ကြီးမြတ်​တဲ့ ယဉ်​​ကျေးမှု​တွေကို မကြာခဏ ဖန်​တီး​မွေးဖွား ​ပေးနိုင်​ခဲ့​ပေမယ်​့ Custer ​ရဲ့ ရက်​စက်​မှု​တွေကို​တော့ မ​ပြောင်​းလဲ နိုင်​ခဲ့ပါဘူး...
ရုပ်​ဖျက်​ပြီး လုယုတို်က်​ခိုက်​ခြင်​းနဲ့ ​​ကျော်​ကြား​နေတဲ့ သူတို့ လူမျိုး​တွေရဲ့ ​အောင်​မြင်​မှု​တွေကို ထိန်​းသိမ်​းလာခဲ့တယ်​...
Custer ​တွေဟာ သူတို့ ကြိုက်​​တဲ့​နေရာကို ကြိုက်​သလို လ​ွတ်လွတ်​လပ်​လပ်​ သွားနိုင်​ခြင်​းနဲ့ လူသား​တွေရဲ့ စိတ်​ကို ထိန်​းချုပ်​နိုင်​တဲ့ စွမ်​းရည်​ကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားကြတယ်​... အဲ့ဒါ​တွေကပဲ သူတို့ကို ကျူး​ကျော်​တိုက်​ခိုက်​လို​စိတ်​​တွေ မြင်​့မားလာ​စေပါတယ်​... အဲ့လို ကျူး​ကျော်​တာ​တွေဟာ Custer နဲ့ လူသား​တွေရဲ့ မ​ရေမတွက်​နိုင်​တဲ့ မျိူးဆက်​ အဆက်​ဆက်​ကြားမှာ ဖြစ်​ပွားလာခဲ့ပါတယ်​...
Custer ​တွေဟာ စိတ်​ထိန်​းချုပ်​ခြင်​းကို လူသား​တွေကိုသာမက အင်​မတန်​မှ ​ကြောက်​စရာ​ကောင်​းတဲ့ insect (​ခြေ​ခြောက်​​ချောင်​း ကိုယ်​သုံးပိုင်​းပါ သတ္တဝါတစ်​မျိုး) spirit 'rhea (အ​တောင်​ပါပြီး မပျံနိုင်​တဲ့ ကုလားအုတ်​ကဲ့သို့​သော ငှက်​တစ်​မျိုး) ကို​လည်​း ကျွမ်​းကျွမ်​းကျင်​ကျင်​ ထိန်းချုပ်နိုင်ပ​​​​ါ​သေးတယ်​... အဲ့ဒီ​ကောင်​​တွေဟာ Lancaster ဆိုတဲ့ ​နေရာမှာ ရှိပြီး​တော့ တ​စ္ဆေ ​တွေရဲ့ အဓိက အရင်​းအမြစ်​ပါပဲတဲ့...
ကြောက်​စရာ​ကောင်​းတဲ့ Insect Spirit ​တွေဟာ Custer လိုချင်​တဲ့ ​နေရာမှာ ချက်​ချင်​း​ပေါ်လာ​အောင်​ ထိန်​းချုပ်​နိုင်​စွမ်​းရှိပါတယ်​... အဲ့ဒီ​ကောင်​​လေး​တွေဟာ ရုပ်​ပိုင်​းနဲ့ ​မှော်​စွမ်​းအားဆိုင်​ရာ အကာအကွယ်​​တွေကို ဘယ်​လို ထိုး​ဖောက်​တိုက်​ခိုက်​ရမလဲ ဆိုတာ ​ကောင်​း​ကောင်​းသိပါတယ်​တဲ့...
အထိတ်​တလန်​့ဖြစ်​စရာ​ကောင်​းတဲ့ အဲ့ဒီ​ကောင်​​လေး​တွေကို ဘယ်​​တော့မှ မဖျက်​ဆီးနိုင်​သလို ဘယ်​​တော့မှ ပြီးဆုံး​ပျောက်​ကွယ်​သွားမှာ မဟုတ်​တဲ့ တ​စ္ဆေ​လေး​တွေပါပဲ... တ​စ္ဆေ ​တွေရဲ့ အရင်​းမြစ်​ အသက်​​သွေး​ကြောကို သူ့ရဲ့ ကမ႓ာကို ပြန်​လည်​ယူ​ဆောင်​လာပြီး​နောက်​ Castellans ကိုအသုံးပြုပြီး သူတို့ရဲ့ အ​ကောင်​းဆုံးနည်​းပညာ​တွေနဲ့ ပိုမိုသန်​မာလာ​အောင်​ အဆင်​့တိုးမြင်​့ခဲ့တယ်​... သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်​ပုံစံကိုလည်​း ​ပြောင်​းလဲပစ်​ခဲ့တယ်​...
Custer ​တွေရဲ့ ဘုရင်​ Zaska ရဲ့ စိတ်​ထိန်​းချုပ်​ ​ခြင်​းစွမ်​းရည်​ဟာ သူမတူ​​အာင် ကျွမ်းကျင်လှပါတယ်​... Zaska ... တ​စ္ဆေ ​တွေရဲ့ အဓိကအသက်​​သွေး​ကြော... အဆုံးမရှိတဲ့ကျူး​ကျော်​တိုက်​ခိုက်​မှု​တွေနဲ့ အစပျိုးခဲ့သူ... သူဟာ သူသိတဲ့ ကမ႓ာမှန်​သမျှကို ကျူး​ကျော်​သိမ်​းပိုက်​ခဲ့တဲ့သူ... တ​စ္ဆေ ​တွေရဲ့ အရင်​းအမြစ်​မှန်​သမျှကို ချုပ်​ကိုင်​ထားတဲ့သူ... သူကို ခုခံတဲ့ သူမှန်​သမျှ ရှင်​းလင်​း သုတ်​သင်​ခဲ့တဲ့သူ... ကမ႓ာအသီးသီးက ကမ႓ာသူ ကမ႓ာသား တွေကို စိတ်​ကို ထိန်​းချုပ်​ ကျွန်​ပြုပြီး ကမ႓ာရဲ့ အရင်​းအမြစ်​ စွမ်​းအား​တွေကို စုတ်​ယူပစ်​ခဲ့တယ်​...
အဲ့ဒီအချက်​​တွေ​ကြောင်​့ Zaska ကို တခြားကမ႓ာက သူ​တွေဟာ သတိထား ​ရှောင်​တိမ်​း​နေကြရပြီး 'king of plunder' (ကျူး​ကျော်​သူ​တွေရဲ့ဘုရင်​) လို့ ​ခေါ်​ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်​... Zaska ဟာ များစွာ​သော Worm (​ခြေလက်​ကင်​းမဲ့၍ ​ကျောရိုးမရှိသော ပိုး​လောက်​​ကောင်​) ​တွေကို အာကာသထဲလွတ်​ခဲ့ပြီး ​နောက်​ထပ်​အသစ်​သစ်​​သော ပိုး​ကောင်​​တွေကို ရှာ​ဖွေဖို့ အချိန်​​ရောက်​လာခဲ့တယ်​...
အဲ့ဒီပိုး​လောက်​​ကောင်​ မိစ္ဆာ​တွေဟာ ဂြိုဟ်​တစ်​ခု​ပေါ်သို့​ရောက်​သွားတဲ့အချိန်​မှာ​တော့ လွတ်​​မြောက်​​လာတဲ့ နတ်​သား Argus ရဲ့ နှိမ်​နင်​းခြင်​းကို ခံခဲ့ရတယ်​... Zaska ကိုယ်​ထဲက တ​စ္ဆေ စွမ်​းအား​တွေကိုလည်​း သီးခြားခွဲထုတ်​ပစ်​ခဲ့တယ်​... Zaska ဟာ Argus ကို ရှုံးနိမ်​့ပြီး​နောက်​ တ​စ္ဆေ စွမ်​းအားအရင်​းမြစ်​​တွေဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်​​ပေါ်က ​ပျောက်​ဆုံးသွားပြီး​ ပြန်​လည်​ရယူဖို့ အစဉ်​အမြဲ ကြိုးပမ်​း​နေပါ​တော့တယ်​...
Zaska ဟာ အရမ်​းသန်​မာပြီး စွမ်​းအား ပါဝါ​တွေနဲ့ ပြည်​့စုံတဲ့ လူ​တွေကို မြင်​လိုက်​ရတဲ့ အခါမှာ​တော့ အင်​မတန်​မှ ဝမ်​းသာပီတိဖြစ်​သွားပါ​တော့တယ်​... စိတ်​အားထန်​သန်​စွာနဲ့ Land of Down ကို အ​ပြေး​ရောက်​လာခဲ့ပါ​တော့တယ်​... (အိမ်​း... LOD က Hero ​တွေကိုမှ ပီတိလာဖြစ်​ရသကိုး... အသက်​ဘယ်​နားကထွက်​မှန်​းမသိ ဖြစ်​သွားမှ... XD) ... သြဇာလွမ်​းမိုးဖို့ ... လုပ်​ကြံသတ်​ဖြတ်​ဖို်​့... ကျူ​း​ကျော်​တိုက်​ခိုက်​ဖို့ ဆိုတဲ့ သူရဲ့ ဆန္ဒ​တွေကို ဖြည်​့ဆည်​းဖို့ ​ရောက်​လာခဲ့ပါ​တော့တယ်​...
Movement Speed. >250
Physical Attack. >107
Magic Power. >0
Magic Resistance. >10
Attack Speed. >0.8
HP Regen. >34
Mana Regen. >20
Basic Attack Crit Rate. >0
Ability Crit Rate. >0
Passive ( Death Wish )
အမြစ်​ပြတ်​​အောင်​ သုတ်​သင်​ရှင်​းလင်​းတတ်​သူ Zhask ဟာ သူရဲ့ Nightmaric Spawn ရဲ့ Basic attack ​တွေဟာ True Damage သက်​​ရောက်​​စေပါမယ်...
Skill 1 ( Nightmaric Inception )
မိမိသတ်​မှတ်​လိုက်​တဲ့ ​နေရာမှာ Nightmaric Spawn လို့​ခေါ်တဲ့ ပိုးကောင်​ပုံစံ ဖန်​တီးလိုက်​ပါတယ်​... Nightmaric Spawn ဟာ မသွားလာနိုင်​ပါဘူး အနီးမှာရှိတဲ့ ရန်​သူ​တွေကို ပစ်​မှာပါ... သူ့ရဲ့ Basic attack နှစ်​ချက်​ပစ်​ပြီးတိုင်​းမှာ Death Ray လို့​ခေါ်တဲ့ ​လေဆာနဲ့ပစ်​ပါတယ်​... Nightmaric Spawn ဟာ skill ရဲ့ level ​ပေါ်မူတည်​ပြီး စွမ်​းအားတိုး(Damage) လာမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​...
Cooldown က 16 စက္ကန်​့ပါ...
Skill2( Nightmare Invation )
သတ်​မှတ်​လိုက်​တဲ့ လမ်​း​ကြောင်​းအတိုင်​း ​လေဆာပုံစံ ပစ်​လိုက်​တာပါ... magic damage 400 (+180% Total Magic Power) သက်​​ရောက်​​စေမှာပါ...
Cooldown က 8 စက္ကန်​့ပါ...
Skill3( Doppelganger of Insect )
Nightmaric Spwan လို့​ခေါ်တဲ့ ပိုး​ကောင်​​​သေး​သေး​လေး​တွေကို အတန်​းလိုက်​ ​မြေကြီး​ပေါ်ပစ်​လွှတ်​လိုက်​တာပါ... မိုင်​း ပုံအဖြစ်​ရှိ​နေမှာဖြစ်​ပါတယ်​.. အနား​ရောက်​လို့ နင်​းမိတဲ့ရန်​သူ​တွေကို Magical Power Damage 160 (+40% Total Magic Power) သက်​​ရောက်​​စေမှာဖြစ်​ပြီး ရန်​သူရဲ့ movement speed 80%3စက္ကန်​့ အ​ကြာ ​နှေးသွား​စေပါတယ်​... ရန်​သူ Hero တစ်​​ယောက်​မှ မနင်​းမိခဲ့လျှင်​ အနားက ဖြတ်​သွားတဲ့ ရန်​သူ minions ​ကို တိုက်​ခိုက်​သွားမှာပါ...
Cooldown 10 စက္ကန်​့ပါ...
Ultimate Skill ( Dominator Befall )
Skill 1 ချထားတဲ့ Nightmaric Spwan ပိုး​ကောင်​ကို ချက်​ချင်​း ဆိုသလို အ​ကောင်​ကြီးသွား​စေပါတယ်​... သူ့ရဲ့ Attack Rate, Damage နဲ့ Defensive Capability (ခုခံမှုစွမ်​းရည်​) ​တွေပို တိုးသွား​စေမှာပါ...
Cooldown က စက္ကန်​့ 60 ပါ...
🎥🎥🎥 Hero Review 🎥🎥🎥 ဆို​တော့ကာ... Over Power လို့ ​ပြောတဲ့ အသံတွေကြား​နေရပါတယ်​... တကယ်​လည်​း Over Power ကြီးဖြစ်​​နေတာပါ... ဒါက​တော့ New Hero ဆို ကြမ်​း​အောင်​ ထုတ်​ ပြီးမှ ပြန်​ပြန်​ Nerf တဲ့ ml ရဲ့ ထုံးစံလိုဖြစ်​​နေပါပြီ... Argus လိုပဲ Original Server ကို မ​ရောက်​လာခင်​ Nerf ခံရမလား ဆို​တာကို​တော့ ​စောင်​့ကြည်​့ရမှာပါ... Advanve Server မှာ အရင်​စမ်​းသပ်​​နေတုန်​းမို့လည်​း ဖြစ်​ပါလိမ်​့မယ်​... Mage.... Battle ​မွှေမယ်​့ ​နောက်​ထပ်​ ဂြိုဟ်​သားတစ်​​ကောင်​​ပေါ့... အထူး သဖြင်​့ သူ့ရဲ့ Ult ... ​တော်​​တော်​ Damage ပြင်​းတာကို ​တွေ့ရပါတယ်​... ​နောက်​ပိုင်​းကျရင်​ skill 1 CD က ဘယ်​​လောက်​မှ မရှိ​တော့တာမို့ ​တော်​​တော်​ ဒုက္ခ​ပေးတယ်​လို့ ဆိုရမှာပါ... skill 1 ပိုး​ကောင်​ကို သတ်​လို့​တော့ရပါတယ်​... ဒါမယ်​့ ​Battle မှာ သူ့ပဲ သတ်​​နေရင်​​တော့... အင်​း... စဉ်​းစားယူကြ​ပေါ့​ဗျာ... :3 Battle Spell က​တော့ flicker ​ပေါ့... အဆင်​​ပြေတာ သုံးနိုင်​ပါတယ်​... အဆင်​​ပြေကြပါ​စေ​ဗျာ...